Anyị na-enyocha Samsung MU6125 TV, 4K na HDR 10 na-eje ozi n'etiti etiti | Akụkọ akụrụngwa
Igwe onyonyo nwere ọtụtụ njirimara na-eme ka anyị tufuo onwe anyị n'oké osimiri nke nkọwa, Anyị enweghị nhọrọ ọ bụla ma ọ bụghị ịga na ịntanetị, ọ dịghịkwa adịrị anyị mfe ịkwụsị ịzụta oke bekee na nnukwu mpaghara, ọkachasị na-atụle ọnụahịa dịgasị iche iche anyị nwere ike ịghọta maka ọnọdụ ndị a. Anyị na-ekwu maka eziokwu ahụ bụ na ụlọ ọrụ telivishọn juputara ugbu a na ụlọ ọrụ ndị na-enye ngwaahịa ndị e chere na ha yiri nke ahụ na ọnụahịa dị iche iche… gịnị bụ ezigbo ihe dị iche?
Taa, anyị ga-enyocha telivishọn dị n'etiti nwere oke nkọwa na nke nwere ọnụahịa dị egwu n'oge Black Friday gara aga, anyị na-ekwu maka telivishọn. Samsung MU6125, TV dị n'etiti na-eweta mkpebi 4K na HDR 10 atụmatụ na akpa niile, ka anyị gaa nyocha ahụ.
Dị ka oge niile, anyị ga-enyocha n'ụzọ zuru ezu njirimara nke telivishọn a nke na-enye anyị imewe nke yiri nke Samsung ndị ọzọ na nke ahụ nwere ike ịme anyị obi abụọ, na-enweghị mgbagha anyị ga-abanye n'ime nkọwa ụfọdụ iji ghọta na ọ bụ otu n'ime ngwaọrụ ndị ọzọ gbanwere mma-ọnụahịa nke ụlọ ọrụ Korea ọ bụ ezie na ọ naghị enweta ọnọdụ ọ kwesịrị na shelf nke nnukwu ụlọ ahịa, kpọmkwem n'ihi nkọwa a. Ekwesiri ighota na a zutara otu ulo oru anyi nyocha na ulo ahia maka ego 499, n’agbanyeghi na ugbua enwego otutu ego di n’ego ruru 679 euro. dị ka ndị ọkachamara na-echekwa.
1 Design: Nnọọ kpochapụwo, Samsung
2 Nka na ụzụ: Adgbazi etiti telivishọn
3 Na ihu ọma ya: Ihe kachasị mma nke Samsung MU6125
4 Mmetụta: Ihe kacha njọ Samsung MU6125
Design: Nnọọ kpochapụwo, Samsung
Anyị enweghị ike ịtụ anya nke ukwuu site na imewe, tumadi n'ihi na akụkụ ndị dị ka nkwado na n'ọnụ ka kpamkpam reused ke ọzọ usoro, ọzọ kpọmkwem anyị nwere otu nkwado dị ka ọtụtụ ngwaọrụ nke Samsung usoro 6 maka igwe onyonyo. A na-eji ihe plastik mee okpokoji ojii nke anthracite ma wuchaa ya Black Jet, ndị hụrụ ájá na micro-abrasions nwere ike, ọ bụ ya mere ọ dị mkpa iburu n'uche na ọ bụrụ na anyị bụ ndị hụrụ nhicha miri emi, TV a kwesịrị ilebara anya na nke ahụ, ọkachasị ịkụ nzọ na ájá ma ọ bụ microfiber.
Ihe plastik n'ebe nile, zoro ezo zuru oke. Samsung maara nke ọma iji zoo ụdị nkọwa a, site na nke a anyị na-ekwu na ozugbo etinyechara telivishọn, ọ ga-agafe n'ụzọ zuru oke site na ihe adịchaghị mkpa, ma mgbe ọ na-abịa na-arịọnụ ya, anyị ga-aghọta na ibu bụ ìhè na na ekele ya curvature ọ na-akwado ndị nnukwu panel nke a 50 inch TV.
Otu ihe ahụ maka njikwa, iwu juputara na bọtịnụ, plastik na-enweghị ihe eji emepụta ihe, arụmọrụ na-arụ ọrụ ọzọ, ọkachasị na-eburu n'uche ohere dị ukwuu nke sistemụ arụmọrụ ya na-enye. Ndị a bụ ogo ya:
Ọnụ ọgụgụ nwere ntọala: 1128.9 x 723.7 x 310.5 mm
Ibu ibu na nkwụnye: 13,70 n'arọ
Nka na ụzụ: Adgbazi etiti telivishọn
Dị ka oge niile, anyị ga-achịkọta njirimara ọrụaka kachasị, yabụ ị nwere ike ịmata ihe ị na-eme. N'ime ha, ekwesiri ighota na n'agbanyeghị inwe ọtụtụ USB na ọbụna Ethernet, ịnụ ụtọ ọtụtụ ngwa ngwa, ihe anyị enweghị bụ Bluetooth, ihe na-atụ uche karịsịa mgbe ijikọ mgbakwunye ngwa mgbakwunye.
panel 50 nke anụ ọhịa ahụ dị larịị
Mkpebi: 4K 3840 x 2160 mkpebi
HDR: Teknụzụ HDR 10
OS: Igwe onyonyo Smart
Njikọ HDMI: 3
Njikọ USB: 2
Audio: Abụọ 20W na-ekwu okwu na Dolby Digital Plus na Bass Reflex
Nchịkwa agba: PurColor
Onu ogugu di omimi: Mega iche
Nchekwa onwe Motion
Ngwa anya ọdịyo mmepụta
Mana ihe ị ga-eburu n'uche bụ ike nke ngwaike nke na-ezobe Smart TV gị, nke ahụ bụ na Samsung na-akụ na ngwaike ya na sistemụ arụmọrụ ya, nke na-eme ka ọ rụọ ọrụ nke ukwuu, na Actualidad Gadget na anyị abụkarịwo ndị hụrụ gam akporo n'anya TV, Anyi aghaghi ikwu na na Tizen ngwaọrụ ozo abughi ihe ekwesiri maka udiri oru a. Isi ihe ọzọ bụ na anyị na-eche ihu na telivishọn na arụmọrụ A ike, ọ bụghị nke kachasị mma n'ahịa, mana ọ na-enye nsonaazụ dị egwu na oriri.
Na ihu ọma ya: Ihe kachasị mma nke Samsung MU6125
Anyị nwere oke asọmpi asọmpi, anyị na-eche ihu otu VA nwere mkpebi 4K nke na-enye anyị ezigbo ọdịiche, ya bụ, anyị ga-enwe ike ịnụ ụtọ onyonyo kwụsiri ike na mkpebi dị mma, enweghị ìhè leakage na ezigbo grayscale. Nke bụ eziokwu bụ na onyinyo ahụ dị oke nkọ, ọ bụ ezie na anyị na-eburu n'uche na anyị na-eche ihu na 50-inch panel, o doro anya na ọ na-ada na mkpebi ndị dị ala karịa 1080p Full HD.
Sistemụ arụmọrụ ya dị oke mma, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ọdịnaya dị n'ịntanetị site na ihe nchọgharị ya ma jiri ohere WiFi, nke nwere ike ijikọ na netwọk 5 GHz. Nke a bụ otu TV a si agagharị, ihe niile n'echefughi na ekele Netflix na ọbụna Movistar + Dị ka ngwa na-adaba na ụlọ ahịa gị anyị nwere ike ịnụ ụtọ ọdịnaya HDR na ntanetị yana na mkpebi 4K. Yabụ Tizen na-enye anyị ohere ị nweta ọtụtụ ihe na telivishọn.
Olu a na - agbachitere onwe ya n'ụzọ dị egwu, jikọtara ya na eriri anya ma na - eme ezigbo ụzọ yana ogwe ụda. egosiputara njirimara Dolby kariri ezuru. Obi abụọ adịghị ya, telivishọn na-arụ ọrụ nke ọma ma na-egosi ihe karịrị ezuru ọha na eze nke ụdị ngwaahịa a.
Mmetụta: Ihe kacha njọ Samsung MU6125
Ihe niile agaghị adị mma, nke mbụ adịghị mma bụ nke ahụ anyị nọ n'ihu otu panel nke 8BitsNke a pụtara na agbanyeghị na anyị nwere HDR 10 ma anyị ga-erite uru nke kacha mma HDR, anyị agaghị enwe ike ịnyagharịa n'etiti usoro niile ọ na-enye anyị, ma ọ bụ maka nke a, anyị ga-achọ otu panel nke 10Bits, ị hụrụ ihe dị iche? Ma eleghị anya, ezughị maka onye ọrụ nkịtị.
Enweghikwa telivishọn Bluetooth, ihe na-anyị bụchaghị na-aga na-atụ uche, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịzọpụta na wiring, n'ihi na ihe atụ mgbe ejikọta a dakọtara ụda mmanya, ma ọ bụ n'ihi na ihe atụ maka akara ngwa na onye ọrụ interface. N'ikpeazụ, rịba ama na o yighị ka igwe onyonyo dị mma igwu egwu, ọkachasị maka onye ọrụ kachasị achọ maka ume na nkwanye ume, n'agbanyeghị na anyị nwere ọnọdụ egwuregwu na-edozi ọnọdụ ahụ nke ọma, oge nzaghachi nke 10 ms Ọ bụghị ọtụtụ, ọ na-atọ dị ka ihe atụ ọkachamara nlekota oru.
Smart TV usoro
Obi abụọ adịghị ya, anyị na-eche ihu na telivishọn nke siri ike na ọnụahịa, ma ọ bụghị na njirimara, Samsung ejirila onwe ya belata ụfọdụ mmezi, ma ọ bụghị n'ile anya, ma si otú ahụ nweta ihuenyo 50-anụ ọhịa nwere nnukwu atụmatụ. Ọ bụ eziokwu na ọ dị ka ọ anaghị adọrọ adọrọ ma ọ bụrụ na ọ dị ihe dị ka euro 700, ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na enwere ike ịhụ ya na ire ere site na euro 499, ọ nwere ike bụrụ ezigbo nhọrọ iji gbanwee igwe onyonyo. O doro anya na ọnụahịa a ị gaghị achọta ihe ka mma n'ahịa.
Ikike pere mpe na obere igbe
4K na HDR10
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Anyị na-enyocha Samsung MU6125 TV, 4K na HDR 10 na ọrụ nke etiti
Achọrọ m ịma ma igwe onyonyo a nwere ndenye HDMI 2.0
Ndewo, achọrọ m ịma otu m ga - esi jikọta ekweisi. Daalụ
O nweghi Bluetooth.